Must Travel Places Archives - Business Plus Travel
20th December 2019nanolabsMust Travel Places
မော်ရိုကိုနိုင်ငံရဲ့ မှော်အရောင် (Morocco, Magic Color)
မော်ရိုကိုရှိ တောင်တန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော Chefchaouen မြို့ကို ရတနာမြို့ဟု လူသိများပါတယ်။ ၁၅ ရာစုတွင် Moulay Ali Ben Ben Moussa မှစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး စပိန်မှ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဂျူးလူမျိုးများအတွက် ခိုလှုံရာနေရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ချာ့ချ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနံရံများ၊ လမ်းကြား၊ ပြည်သူများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည့်အရောင်ဖြစ်ပြီး အေးသောအစိမ်းရောင် ရှပ်အင်္ကျီကို အာဖရိကတိုက်၏ နေရောင်ခြည်တွင်တွေ့ရသော်လည်း၊ ဂျူးလူမျိုးများသည် ၎င်းတို့၏ဌာနတစ်ခုလုံးကို မှော်အပြာရောင်(Magical Blue) တစ်ခုအဖြစ်သာ ခြယ်သထားကြပါတယ်။ ဂျူးတို့၏ဘာသာရေးယုံကြည်မှုအရ အပြာရောင်သည်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးအား ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနံရံတွေဟာ လူတွေကို အနန္တတန်ခိုးရှင်အား သတိရဖို့ အမြဲသတိပေးနေမှာပါ။ Chaouen တွင်နေထိုင်သောသူများသည် ယခုအခါ Berber နှင့် မွတ်စလင်ဘာဘာဝင်အများစုဖြစ်ကြသော်လည်း ဆေးသုတ်သည့်အစဉ်အလာသည် မြို့၏ဆွဲဆောင်မှုလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်၊...
တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ မဖြစ်မနေ သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ Scandinavia နိုင်ငံများ
သိပ်ကိုလှတဲ့ တောတောင်သဘာဝရှူခင်းကြီးတွေ ခမ်းနာကြီးကျယ်တဲ့ ဥရောပရဲ့ မျက်နှာဖုံး မြိုတော်ကြီးတွေရဲ့ လှပတဲ့ ပုံတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ Scandinavia နိုင်ငံတွေဆိုတာက ကမ္ဘာမှာ ဆောင်းဥတုရဲ့ ဒဏ်ကိုခံစားရဆုံး ဥရောပမြောက်ပိုင်းကျွန်းဆွယ်ပေါ်က ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသွားတဲ့အခါ အလွဲတွေမဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?
ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဏ်ကတ်ကို လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ ??